IGAD oo soo dhoweysay xayiraadda laga qaadey xawaaladaha Soomaalida ee Kenya – Radio Muqdisho
IGAD oo soo dhoweysay xayiraadda laga qaadey xawaaladaha Soomaalida ee Kenya
Urur-goboleedka IGAD ayaa soo dhaweeyay dib u fasixiddii ay Kenya dib u fasaxday Xawaaladaha Soomaalida ee dalkeeda ka howl-gala, kuwaasoo ay xayiraad saartay bishii Abriil kaddib weerarkii Jaamacadda Gaarisa.
Xoghayaha guud ee IGAD Maxbuub Macallin ayaa sheegay in xawaaladaha dib loo furay ay wax badan ka tarayso nolosha dad badan oo ku nool Geeska Afrika, kuwaasoo noloshoodu ku xiran tahay lacagaha dibadaha looga soo diro.
“Tani waa tallaabo geesinimo leh oo uu qaaday madaxweynaha Kenya, waana mid uu u arkay inaysan dan u ahayn Keenyaanka oo keliya, laakiinse ay dani uug jirto dadka gobolka oo dhan ku nool,” ayuu yiri Maxbuub Macallin.
Bangiga Dhexe ee Kenya ayaa maalin ka hor xayiraaddii ka qaaday 13 xawaaladood oo ay Soomaalidu ku leedahay Nairobi, kuwaasoo horay loogu eedeeyay inay lacago siiyaan kooxaha argagaxisada ah ee Kenya ka jira iyo Al-shabaab.
Ugu yaraan 40% Qoysaska Soomaaliyeed ayay noloshoodu ku tiirsan tahay lacagaha looga soo diro dalka dibaddiisa, kuwaasoo soo mara xawaalahada kala duwan ee ka howlgala iyo dalalka gobolka ku yaalla, maadaama uusan dalka ka jirin nidaam banki.
Maxbuub Macallin ayaa ka dalbaday dowladda Kenya inay ilaaliso Xawaaladaha oo howlo wanaagsan u haya shacabka, sida qoxootiga ku nool dalka Kenya oo inta badan ah Soomaali kasoo carartay colaadaha dalkooda ka jira.
Sidoo kale, Macallin ayaa ka codsaday dalalka reer galbeedka inay iyaguna sii wadaan caawinta sidii ay u shaqeyn lahaayeen xawaaladaha, si loo yareeyo saboolnimada ka jirta gobolka iyo amni-darrada.
Ugu dambeyn, dib u fasaxidda ay Kenya dib u fasaxday shaqada Xawaaladaha ka howlgala dalkeeda ayaa waxay imaanaysaa iyadoo hay’adda lacagta Adduunka ee IMF ay sheegtay dhawaan in dhaqaalaha Somalia uu sare u kacay 3.7%, lana filayo inuu intaas kasii bato.
Wasiir Maareeye oo bahda saxaafadda ugu baaqay ka qeyb qaadashada hirgelinta Federaalka
Qarax lala eegtay kolonyo Imaaraadku leeyahay